Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » ICanada ibonelela ngeeSayithi eziNtsha zokuZibekela wedwa kwi-COVID-19
Nangona kunjalo, kwabanye abantu baseCanada, iimeko zezindlu ezixineneyo kunye neendleko eziphezulu zinokwenza ukuba kungakhuseleki okanye kungenzeki ukuba bazimele, babeke bona, iintsapho zabo kunye noluntu emngciphekweni ngaphandle kwempazamo yabo.
Namhlanje, oHloniphekileyo uJean-Yves Duclos, uMphathiswa wezeMpilo, ubhengeze ngaphezulu kwe-5 yezigidi zeerandi ukuxhasa ezi projekthi zimbini zilandelayo eBritish Columbia, ngeNkqubo yeZiko leNdawo eziKhuselekileyo zokuZikhethela yaseCanada:
• inkqubo yembuyekezo esekwe kumqeshi kubasebenzi bezolimo abahlala kunye nabasebenza kulo lonke elaseBritish Columbia ngoBuphathiswa bezoLimo, ukutya kunye nezokuLoba kuRhulumente waseBritish Columbia ukunceda ukuxhasa iimfuno zabasebenzi bezolimo bodwa; kwaye
• indawo ekhuselekileyo yokuzikhethela yokuzikhethela kwiSixeko saseSurrey ngeFraser Health Authority.
Iisayithi zokuzimela ngokuzithandela zinceda abantu abane-COVID-19-okanye abaye bachanabeka kuyo-bafikelele kwiindawo zokuhlala ezikhuselekileyo ukuze bazigcine bekhuselekile kunye noluntu lwabo. Ezi ndawo zongezelelekileyo kumaziko akhoyo abantu abanengxaki yokungabi namakhaya abafuna ukuhlala bodwa ngenxa yovavanyo oluqinisekileyo.
Iindawo zokwahlukaniswa ngokuzithandela zinciphisa umngcipheko wokusasaza le ntsholongwane phakathi konxibelelwano lwasekhaya kwiimeko apho abantu bajongene nezindlu ezixineneyo kwaye bengenandlela yimbi. Ezi sayithi sesinye sezixhobo zokusabela ngokukhawuleza ezisekwe ukunceda ukunqanda ukusasazeka kwe-COVID-19, kwaye zinokuthunyelwa kuluntu olujongene noqhambuko.
INkqubo yeeSayithi zokuZikhethela eziKhuselekileyo ixhasa ngokuthe ngqo izixeko, oomasipala kunye nemimandla yezempilo esemngciphekweni wosulelo lwe-COVID-19 kuluntu. Iziza ezikhethwe phantsi kweNkqubo zibonelela ngendawo efikelelekayo apho abantu banokuzibekela bucala ngokukhuselekileyo kangangexesha elifunekayo. Amagosa ezempilo oluntu ekuhlaleni amisela abantu abafanelekileyo abanokuthi banikwe ithuba lokutshintshela kwindawo ebekwe bodwa ngokuzithandela ukuze babagcine bekhuselekile bona kunye noonxibelelwano nemizi yabo ngexesha lokuqhambuka kwindawo abahlala kuyo.